Paper Gift Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Paper Gift Box)
igbe onyinye ekeresimesi ji aka Igbe mpempe akwụkwọ cylinder na mpempe akwụkwọ CMYK maka nchịkọta onyinye ekeresimesi Igbe onyinye pụrụ iche nke cylinder ji aka, wepụ ya ngwa ngwa Nabata omenaala na-eme igbe onyinye ka ọ bụrụ atụmatụ gị Ajuju ma obu ase ajuju, pls nweere onwe gi ịkpọtụrụ Benty. Liyang Paper ngwaahịa...
Akwukwo onyinye nke brown kraft igbe agba aja aja kraft, igbe kaadiboodu siri ike maka ngwugwu onyinye Igbe onyinye kraft na mpempe rịbọn akwụkwọ ndụ akwụkwọ maka nkwakọ onyinye, enwere agba dị iche iche nke rịbọn maka nhọrọ gị. igbe onyinye igbe na-adịkarị larịị, igbe dị larịị maka mbupu nwere ike ịchekwa ego mbupu...
Akwukwo onyinye ndi mmadu nke bu ngwugwu Igbe a na- ekechi akwa bụ igbe igbe siri ike, anyị na-eme igbe mpempe akwụkwọ a na igbe dị mfe na igbe igbe dị na akara stamping na mpụga igbe, a na-ahazi igbe igbe na imewe, igbe igbe ndị ọzọ dị ka igbe igbe, igbe okirikiri, igbe mbadamba igbe na igbe ụdị akwụkwọ na ihe ndị...
Gburugburu bangle mgbaaka ọla akwụkwọ onyinye onyinye igbe Bangle akwụkwọ igbe , nke emere na igbe igbe na-ewu ewu, mkpuchi na igbe dị n'okpuru, igbe igbe pịrị apị, igbe mpempe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ maka nhọrọ gị. Gburugburu bangle igbe na siliki rịbọn mma, mee igbe ọzọ okomoko! Ngwongwo dị mma nke bangle dị mma...
Akwukwo onyinye onyinye ekwentị Mpempe akwụkwọ nghọta , nke ejiri mpempe akwụkwọ artgsm dị mkpụmkpụ nke 350gsm nwere mbipụta akwụkwọ mmado dị elu igbe onyinye , igbe igbe dị ọnụ, na igbe kpọchiri n’elu mkpọchi ekwentị, ka ọ dịrị gị mfe iburu ma ọ bụ tinye ya n’ebe akwa matt lamination ekwentị igbe nwere windo PVC doro...
Nkwakọ ngwaahịa igbe akwụkwọ ndozi tii Igbe kaadiboodu siri ike , igbe mpempe akwụkwọ tii tinyere mbipụta akara ụlọ ọrụ gị Mpempe akwụkwọ tii dị ụtọ n’ime akwụkwọ akpịrị akpịrị akwụkwọ na mechie ndọta maka ị forụ tii Igbe tii na kaadiboodu nke a na-etinye ihe n’ime ihe eji etu esi Nabata omenaala na-eme ka kọfị tii...
Akwukwo onyinye onyinye ifuru na windo PVC doro anya Akwukwo onyinye onyinye Ifuru a bu nke eji akpukpo ahihia nke CMYK nweta ya. Igbe onyinye maka ifuru na imewe windo nke PVC maka igosi ifuru. Akwukwo Onyinye Mpempe Akwụkwọ nke Window windo okpukpu abuo nwere ike buru ibu ma chekwaa olu mgbe ibufe. Liyang Akwụkwọ...
Ngwakọta igbe igbe A na-eji igbe akwụkwọ ihe ndozi okomoko mee ihe ngosi nka, n'ihi na onyinye dị okomoko; Njirimara nke igbe igbe osisi a dị n'elu dịka ọnụ ụzọ; Igbe nkwakọ ngwaahịa Perfume na igbe EVA iji jide karama na-esi ísì ụtọ. Igbe ihe eji achọ ihe onyinye na-anabata ihe emere gị nke ejiri akara ngosi...
Akwukwo Nchekwa Onyinye Ederede ahaziri iche
Akwukwo Nchekwa Onyinye Ederede ahaziri iche Akwukwo Nchekwa Onyinye Ederede ahaziri iche na akara ejiri kpochie . Igbe onyinye Kraft Akwụkwọ Kraft maka nkwakọ, ihe puru iche na ezigbo agwa . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang Printing, Anyị kpebisiri ike ime ka afọ ju gị, nke ahụ bụ...
Akwụkwọ onyinye onyinye agba juru eju Akwukwo onyinye onyinye mpempe akwụkwọ a nke mpempe akwụkwọ CMYK zuru oke. Akwukwo onyinye onyinye igbe . Mpempe akwụkwọ Boopa Akwukwo Nsoro –bottom nwere ike ibu di larịị ma chekwaa olu mgbe ị na-ebufe ya. Liyang Akwụkwọ Ngwaahịa Co., Ltd. Companylọ ọrụ anyị dị na Dongguan, CN,...
Omenala dị elu mere igbe mpempe akwụkwọ kraft efu Nke a Packaging Box mere ntekwasa art akwụkwọ CMYK full agba obibi akwụkwọ. Mpempe Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ maka nkwakọ ngwaahịa onyinye. Igbe onyinye siri ike nwere ike ịbụ igbe dị larịị ma chekwaa olu mgbe ibufe. Liyang Akwụkwọ Ngwaahịa Co., Ltd. Companylọ ọrụ anyị dị...
Akwukwọ Onyinye Mpempe Akwụkwọ Nke Igwe Ọdụdọ Nke Igwe Ọdụdọ
Akwukwọ Onyinye Mpempe Akwụkwọ Nke Igwe Ọdụdọ Nke Igwe Ọdụdọ Nkwakọ ngwaahịa igbe ndọta ọhụrụ na windo PVC, ọnụahịa dị ọnụ ala na ezigbo mma. Igbe nchekwa nchekwa ọtụtụ-arụ ọrụ maka onyinye, ịchọ mma, ọla, uwe, bel, nche, nchịkọta mmanya. Igbe mpempe akwụkwọ maka onyinye nwere oke na ahaziri ahaziri. Igbe onyinye...
Akwukwo onyinye ndi ozuzu ahia nke ahia
Akwukwo onyinye ndi ozuzu ahia nke ahia Akwukwo onyinye ndi ozu ahia ahia ahia nke ahia, onu ahia ya di elu. Enyinye onyinye onyinye eji akara ngosi, juputara na njiri mara gi Akwukwo onyinye onyinye ngwugwu na nke eji ahaziri ya mee ihe, ezigbo ọkwa. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li...